မိုးစက်ပွင့်: နှစ်နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ
လာမယ့် ဆဲဗင်းဂျုလိုင်ဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်နှစ်မြောက်ပါ။ ၀၇.၀၇.၀၇ ကို အမှတ်တရ မင်္ဂလာပွဲလုပ်ခဲ့တာမို့ပါ။ တစ်နယ်စီဝေးနေကြတဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က အဲဒီနှစ်ပါတ်လည်မှာတော့ အမြဲဆုံဖြစ်အောင်ဆုံပြီး အမှတ်တရ ပွဲလေးတစ်ခုခု စီစဉ်ကြမယ်လို့ တိုင်ပင်ထားကြတာ။ မနှစ်ကတော့ အိမ်မှာ ဘုန်းကြီးငါးပါးပင့်ပြီး ပရိတ်နာ၊ သင်္ကန်းကပ်၊ တရားနာကြတယ်။ မိတ်ဆွေ ၃-၄၀ဖိတ်ပြီး ကြာဇံချက်ကျွေးတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပဲ သွားပြီးလှူစရာရှိတာလှူ၊ ပြီးရင် ပစ်ကနစ်ထွက်ရအောင်လို့ ပြောထားတယ်။ သူက နားအေးရင်ပြီးရော၊ ဘာမဆို သဘောတူလွယ်တတ်တဲ့သူပါ။
ကျမကစိတ်ကူးယဉ်သမားဆိုတော့ မနှစ်က အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံပါတဲ့ဖန်ခွက်တို့၊ နှစ်ပါတ်လည် ပြက္ခဒိန်တို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို သူကသဘောတကျနဲ့ ဒီနှစ်လဲ လုပ်ဦးနော်တဲ့။ ဟင့်အင်း ဒီနှစ် ထူးထူးခြားခြား မထင်မှတ်တဲ့ အမှတ်တရ တစ်ခုလုပ်မှာလို့။ ဈေးလဲမကြီးဘူးလို့။ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုးလဲဖြတ်လို့မရဘူး လို့။ အဲဒါ ဘာလဲ လို့ မေးတော့ သူက မှန်အောင် မဖြေနိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတို့ရော သိလားဟင် ?????????? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ကဗျာစာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ရေးတာက ၃ ပုဒ်ထဲပါ။ သူများ ဘလော့တကာက သွားနှိုက်ထားတာက ၁၇ ပုဒ်ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၂၀ ပေါ့။ အံမယ် မူးနောက်နေအောင် ကဗျာရှာရ၊ ဓါတ်ပုံရှာရ၊ ကလစ်အပ်ပုံရှာရ၊ နာရီတော်တော်ကြာအောင် ပုံနဲ့စာနဲ့ နေရာချပြီ်းဒီဇိုင်းလုပ်ရ၊ မီနီစာအုပ်လေး ဆိုင်သွားအပ်ရနဲ့ ပင်ပန်းပါ့။ အချစ်အတွက်လေ အချစ်အတွက် ဟာဟ။ အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့- ငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရဘူးလို့ အဟဲ။ အဲဒီစာအုပ်လေးထဲက ပုံလေးတွေနဲ့ ကဗျာတစ်ချိူ့ (ကိုယ်တိုင်ရေးနှစ်ပုဒ်အပါအ၀င်) ကို အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်။
မေတ္တာ သစ္စာ နဲ့ နားလည်မှု ဆိုတာ
ကို နဲ့ညီမလေး တို့ရဲ့
ရင်ထဲက မေတ္တာ ရာသက်ပန် မြဲစေဖို့
A sky to shower only the rain of love
A star to shine over my window
A place to give warmth and sweetness
A melody to entertain my heart; and
A world to make my life meaningful.
အော်…. သက်ရွယ်ခါးကုန်း၊ သွားကြွေပြုန်းလည်း
( ပုံအားလုံးကို flickr ကယူပါတယ်။ )
Posted by Me at 18:56
Labels: အချစ်, အထိမ်းအမှတ်နေ့
Sint 27 February 2010 at 11:11